Al Qaacida oo shuraako sameysaneysa - BBC Somali
Al Qaacida oo shuraako sameysaneysa
14 Febraayo 2012
Image caption kooxda Al Shabab ee la midowdey Al Qaacida
Walow qalabka warbaahinta dunida ay si weyn diiradda u saarayaan arrimaha dalalka Carabta, ururka Al Qaacidah kuma badneyn bogagga hore ee wararka caalamka.
Laakiin qaraarkii dhowaan ka soo baxay ururka ee kula midoobayo Al-Shabab ma loo qaadan karaa inuu ka dhigan yahay in ururka uu mar kale ka soo ifbaxayo gobolka.
Hoggaanka Al Qaacida waxaa uu ka hadley dhacdooyinka Bariga Dhexe iyo Afrika iyagoo shaaciyey laba war oo waaweyn.
Warkii ugu horeeyey waxay shaaciyeen 9kii bishii February, markii ninkii bedeley Osama Bin Ladin, Dr Ayman Al Zawahiri, uu sheegey in Al Qaacida ay la midowdey kooxda Al-Shabab ee dalka Somalia.
Waxaa xigey, 11kii February oo hoggaamiyaha Al Qaacida uu ku baaqey jihaad ama dagaal talada looga tuurayo dowladda Madaxweyne Bashar Al Asad ee Suuriya.
'Goobo lagu dhuunto'
Hadaba waa maxay sababta ka dambeysa shaacinta wararkan iyo saameynta ay yeelan karaan. ?
Khubarada arrimaha gobolka waxay wararka ku saabsan midowga Al-Shabab iyo Al Qaacida u arkaan mid shaki leh, waayo Al-Shabab horey ayayba u sheegtey inay ku biireyso Al Qaacida sannadkii 2009.
Waxaa laga yaabaa in Zawahiri uu ku celin doono baaqii Bin Laden ee lagu qoranayey dagaalyahanada shisheeye.
Markan waa Al Qaacidah tan ku dhawaaqdey midowga, taasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen calaamad muujineysa in cadaadis ba'an u haysto uuna ururka doonayo inuu helo shuraako cusub iyo weliba goobo cusub oo dagaal.
Toddobaadkii la soo dhaafey Machadka RUSI (Royal United Services Institute) waxaa uu sheegey in tirada dagaalyahanada aan Somalia u dhalan ee ku jira Al-Shabab ay gaareyso 200, iyadoo boqolkiiba 25 ay haystaan dhalashada Britain.
Tirada xubnaha Al Qaacida ee ka hawlgala Somalia waa mid aad u yar.
Talaabada ay Al-Shabab ku aqbashey, kuna soo dhoweysey midowgan waa mid la yaab leh.
Waa dhab in Al-Shabab uu cadaadis weyn haysto, Muqdisho ayaa laga saarey, ciidamada Kenyana waxay gadaal u uga riixeen dhanka xadka koonfuur galbeed, ciidmada Midowga Afrikana weeraro ayay kala kulmayaan.
Laakiin Al-Shabab weli waa kooxda keliya ee Somali ugu xooggan, waxaana la filayey in dhowaan amaba waqtiga soo socda ay hubka dhigaan , wadahadal nabadeedna galaan.
Dowlado badan oo isku dayayey inay xal kama dambeys ah u helaan dhibaatada Somalia, ayaa haatan u arkaya Al-Shabab inay nafsad ahaanteeda meel cidla ah oo aad u adag is dhigtey.
Baaqa Al Qaacida ee jihaadka ka dhanka ah madaxweyna Asad, iyana dareen kale oo gaar ah ayay leedahay.
Maalintii Sabtida, Zawahiri waxaa uu ugu baaqey Muslimiinta dalalka deriska ah ee Jordan, Turkey iyo Lubnaan inay kacaan , taageerana u fidiyaan mucaaradka ka soo horjeeda xukunka Madaxweyne Assad.
Waxaa uu shacabka reer Syria u sheegey inaaney isku haleyn dalalka reer galbeedka iyo dowladaha Carabta. Hase yeeshee maanu soo hadal qaadin Ruushka iyo Shiinaha oo horjoogsadey qaraar Qaramada Midoobey doonayey inuu ku farageliyo xasarada Syria.
Waxaa muuqata in Al Qaacisa ay ku jirto xaalad la mid ah tii ay ku jirtey bishii February 2003 , markii laga saarey Afghanistan, kadibna Osama Bin Laden uu ku baaqey in Muslimiinta ay u kacaan difaaca Ciraaq.
Al Qaacida waxay haatan dooneysaa inay ka faaideysato khilaafka dhanka mad-habta diimaha, xilli Sunniga ugu badan dalka ay aad uga xun yihiin Shiicada Calawiyiinta ee tirada yar oo xukunka haya.
Baaqa Zawahiri si weyn dheg looguma dhigin bogagga xiriirka bulshada sida facebook iyo twitter.